मानवजातिका विभिन्न किसिमका जीवनशैलीहरूको कारणले सीमाहरू पैदा भएका हुन् | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
16 अगस्ट 2021
परमेश्‍वरले सबै थोकको सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूको निम्ति सीमाहरू स्थापित गर्नुभयो; तीमध्येमा उहाँले सबै किसिमका जीवित प्राणीहरूको पालनपोषण गर्नुभयो। त्यही बेला, उहाँले मानवजातिको अस्तित्वको निम्ति विभिन्न माध्यमहरू पनि तयार पार्नुभयो, यसैले तैँले देख्न सक्छस्, कि मानवजातिको अस्तित्वको निम्ति केवल एउटै मात्र माध्ययम छैन, न त तिनीहरूको अस्तित्वको निम्ति एउटै किसिमको वातावरण मात्र छ। परमेश्‍वरले मानवको निम्ति विभिन्न किसिमका खाना र पानीका स्रोतहरू तयार गर्नुभएको विषयमा हामीले यस अगाडि नै कुरा गर्‍यौं, जुन मानवजातिको जीवनलाई देहमा निरन्तरता दिनको निम्ति अत्यन्तै जरुरी छ। तैपनि, यस मानवजातिको बिचमा सबै मानिसहरूले अन्नले मात्र जीवन निर्वाह गर्दैनन्। भौगोलिक वातावरण र भूभागको कारण मानिसहरूसँग जीवित रहने धेरै माध्यमहरू छन्। जीवित रहने सम्‍बन्धी यी सबै माध्यमहरू परमेश्‍वरले तयार गर्नुभएको हो। यसैले सबै मानवजाति प्राथमिक रूपले खेतीपातीमा नै संलग्न छन् भन्‍ने छैन। अर्थात्, सबै मानिसहरूले अन्नबालीबाट नै खाना प्राप्त गर्छन् भन्‍ने छैन। हामीले कुराकानी गर्न गइरहेको विषयको तेस्रो भाग यही हो: मानवजातिका विभिन्न किसिमका जीवनशैलीहरूको कारणले सीमाहरू पैदा भएका हुन्। त्यसो भए मानवका अन्य के-कस्ता किसिमका जीवनशैलीहरू छन्? विभिन्न खानाको स्रोतका आधारमा अन्य कस्ता किसिमका मानिसहरू छन्? कैयौँ प्राथमिक प्रकारहरू छन्।
पहिलोचाहिँ शिकारी जीवनशैली हो। त्यो के हो भनेर सबैलाई थाहा छ। शिकार गरेर बाँच्ने मानिसहरूले के खान्छन्? (शिकार।) तिनीहरूले जङ्गलका चरा र जीव-जनावर खान्छन्। “शिकार” चाहिँ आधुनिक शब्द हो। शिकारीहरूले यसलाई “शिकार” को रूपमा सोच्दैनन्; तिनीहरूले यसलाई खानाको रूपमा अर्थात् तिनीहरूको दैनिक निर्वाहको वस्तुको रूपमा सोच्छन्। उदाहरणको निम्ति, तिनीहरूले मृग भेट्टाउँछन्, त्यो किसानले जमिनबाट खाना प्राप्त गरे जस्तै हो। किसानले जमिनबाट खाना प्राप्त गर्छ र उसले खाना देख्दा ऊ खुसी हुन्छ र ऊ ढुक्‍क हुन्छ। खाने अन्न भएको कारण परिवार भोको रहनेछैन। किसानको हृदय चिन्तारहित हुन्छ र उसले सन्तुष्टिको अनुभव गर्छ। आफूले समातेको कुरा देखेर शिकारीले पनि ढुक्‍क र सन्तुष्टिको अनुभूति गर्छ किनकि अब उसले खानाको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन। अर्को भोजनको निम्ति केही खानेकुरा छ र भोकै बस्नुपर्दैन। ऊ बाँच्नको लागि शिकार गर्ने व्यक्ति हो। शिकार गरेर जीवन निर्वाह गर्नेमध्ये धेरैजसो मानिसहरू पहाडी वनजङ्गलहरूमा बस्छन्। तिनीहरूले खेतीपाती गर्दैनन्। त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले तिनीहरू विभिन्न जीवित प्राणीहरू, विभिन्न किसिममा शिकारहरूको भरमा बाँच्छन्। यो पहिलो किसिमको जीवनशैली हो जुन सामान्य मानिसहरूको भन्दा फरक छ।
दोस्रो किसिमचाहिँ पशुपालकहरूको जीवनशैली हो। जीविकोपार्जनको निम्ति पशुपालन गर्ने मानिसहरूले खेतीपाती पनि गर्छन्? (गर्दैनन्।) त्यसो भए तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरू कसरी बाँच्छन्? (तिनीहरूले धेरैजसो समय जीविकोपार्जनको निम्ति वस्तुभाउ र भेडाहरूको हेरचाह गर्छन्, र हिँउदको बेलामा आफ्ना वस्तुभाउलाई मार्छन् र खान्छन्। तिनीहरूको प्रमुख खाद्य सामाग्री गोमांस र खसीको मासु हो, तिनीहरूले दुध चिया पिउँछन्। पशुपालकहरू चारै ऋतु व्यस्त रहे तापनि, तिनीहरूले राम्ररी नै खान्छन्। तिनीहरूसँग प्रशस्त दुध, दुग्ध पदार्थहरू र मासु हुन्छन्।) जीविकोपार्जनको निम्ति पशुपालन गर्ने मानिसहरूले मुख्यतया गोमांस र खसीको मासु खान्छन्, भेडा र गाईको दुध पिउँछन् र तिनीहरूका कपालमा बतास र अनुहारमा घाम पार्दै जमिनमा पशु र घोडाहरूमाथि चढेर आफ्ना पशुहरूको हेरचाह गर्छन्। तिनीहरूले आधुनिक जीवनका तनावहरूको सामना गर्दैनन्। तिनीहरूले निलो आकाश र घाँसे मैदानहरूलाई दिनभरि नियाल्छन्। पशुपालन गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने धेरैजसो मानिसहरू घाँसे मैदानहरूमा बस्छन् र तिनीहरूले पुस्तौँदेखि आफ्नो फिरन्ते जीवनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। घाँसे मैदानको जीवन केही हदसम्म एकलो किसिमको भए तापनि, यो धेरै खुसी जीवन पनि हो। यो खराब किसिमको जीवन पद्धति होइन।
तेस्रो किसिमको जीवनशैली मछुवाहरूको जीवनशैली हो। मानवजातिको सानो हिस्सा समुद्रका किनार वा साना टापुहरूमा बस्छन्। तिनीहरूको वरिपरि पानी, अगाडि समुद्र हुन्छ। यी मानिसहरूले जीविकोपार्जनको निम्ति माछा मार्छन्। जीविकोपार्जनको निम्ति माछा मार्नेहरूको खानाको स्रोत के हो? सबै किसिमका माछा, समुद्री खाना र समुद्रका अन्य उत्पादनहरू तिनीहरूको खानाको स्रोत हुन्। जीविकोपार्जनको निम्ति माछा मार्नेहरूले खेतीपाती गर्दैनन्, तर हरेक दिन माछा मारेर बिताउँछन्। तिनीहरूको प्रमुख खानामा विभिन्न किसिमका माछा र समुद्री उत्पादनहरू पर्छन्। तिनीहरूले चामल, पिठो र दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको निम्ति यी कुराहरूको बेचबिखन पनि गर्छन्। पानीको नजिक बसोबास गर्नेहरूको फरक जीवनशैली यही हो। पानीको नजिक बसोबास गरेर तिनीहरू खानाको निम्ति यसैमा भर पर्छन् र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्छन्। माछा मार्ने कामले तिनीहरूलाई खाना मात्र दिने होइन, तर यो जीविकोपार्जनको माध्यम पनि हो।
जमिनमा खेतिपाति गर्ने बाहेक, मानवजाति माथि उल्लिखित तिन किसिमका जीवनशैली अनुसार जिउँछन्। तैपनि, बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले जीविकोपार्जनको निम्ति खेतीपाती गर्छन् र थोरै मानिसहरू मात्र पशुपालन गरेर, माछा मारेर र शिकार गरेर बाँच्छन्। अनि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूलाई के कुराको आवश्यकता पर्छ? तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुरा जमिन हो। पुस्तौँ पुस्तादेखि तिनीहरू जमिनमा अन्नबाली रोपेर बाँचेका छन् र चाहे तिनीहरूले सागसब्जी, फलफूल वा अन्नबालीहरू जे रोपून् तिनीहरूले आफ्ना खाना र दैनिक आवश्यकताका कुराहरू पृथ्वीबाट नै प्राप्त गर्छन्।
अघिल्लो: परमेश्‍वरले विभिन्‍न भौगोलिक वातावरणको लागि सीमाहरू तय गर्नुहुन्छ